Taom-pianarana vaovao : misondrotra ny saran’ny famandrihan-toerana | NewsMada
Taom-pianarana vaovao : misondrotra ny saran’ny famandrihan-toerana
Mifarana, amin’ny fomba ofisialy anio, ny taom-pianarana 2016-2017, araka ny fandaharam-potoana navoakan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Miditra amin’ny fialan-tsasatra ny mpianatra rehetra, ankoatra ny kilasy 3ème hiatrika fanadinana BEPC manomboka ny alatsinainy izao. Tsy miandry ela, misokatra ihany koa ny famandrihan-toerana ho an’ny taom-pianarana vaovao 2017-2018 eny amin’ny sekoly tsy miankina, indrindra eto an-dRenivohitra. 35 000 Ar ka hatramin’ny 45 000 Ar ny saran’ny fisoratana anarana manomboka amin’ny volana jolay ka hatramin’ny volana septambra. 45 000 Ar ny frais généraux aloa isaky ny mpianatra hikarakarana ny efitrano fianarana sy ny fitaovana rehetra ao anatiny. Ny mahagaga anefa, tsy nahita fiovana amin’ny loko sy ny fanatsarana hafa ny ray aman-dreny rehefa miditra amin’ny taom-pianarana vaovao fa ny teo ihany no vantanin’ny mpianatra.
Nahitana fisondrotana 5 000 Ar (lasa 40 000 Ar) koa ny saram-pianarana ho an’ny taona vaovao izay saika miakatra isan-taona mihitsy. « Manaraka ny fisondrotry ny vidim-piainana”, hoy ny talen-tsekoly tsy miankina iray. Amin’ny ankapobeny, mila manomana 120 000 Ar ny ray aman-dreny ho an’ny zaza iray ho an’ny taom-pianarana vaovao. Tsy mbola tafiditra ao ny vidin’ny fitaovam-pianarana sy ny boky ary ny akanjo fanampiana iraisana tsy maintsy vidina any an-dakilasy. Ho an’ny sekolim-panjakana, tsy maintsy hefaina ny latsakemboky ny fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra (Fram), 5 000 Ar ka hatramin’ny 35 000 Ar isaky ny ray aman-dreny.
Ny 18 septambra ho avy izao ny fidiran’ny mpandraharaha amin’ny sekolim-panjakana, 25 septambra miverina any an-dakilasy ny mpanabe manomana ny taom-pianarana. Ny 2 oktobra vao hiverina any an-tsekoly ny mpianatra.